Anticancer mushonga - Shijiazhuang Yiling Hospital
Mumiriri Anti-kenza mushonga vanotungamirirwa anondibatsira zvirwere dzidziso
3.The Program Vachitsigirwa ne imwe Grant kubva New Drug Research Nheyo State Administration kuti Traditional Chinese Medicine
Kushandiswawo bundu varwere sezvo zvinotevera:
1.Improve unhu upenyu yakaratidza kuti zvakadai tumourous zviratidzo sokutadza kudya, kuda kurutsa, kurutsa uye utera
2.Taking vasati uye pashure radiotherapy uye mishonga inogona kuderedza divi-kushanda uye kuvandudza kurapwa nemigumisiro.
3.Applicable asati uye pashure bundu mashandiro uye mishonga iri kunaya rwakazara Vandudzai kutapata, paitwe kupora uye achawedzera surrival
Deredzai Side-zvinokonzerwa Riwedzere Kurapwa uye Radiation Migumisiro
Nenjodzi akazviratidza muna 26 varwere vose 308 muna Yangzheng Xiaoji boka panguva pakuongorora, uye akaonekwa mune 9 varwere vose 104 muboka kuzvidzora, izvo nokutonga vakanga hachibatsiri experimental nemishonga, uye haana kukanganisa kurapwa.
Munguva kunotoda kutongwa, ongorora migumisiro unonzi, electrocardiograph, renal basa, weti uye mutsvina yadzo purogiramu bvunzo muna YZXJ boka, hapana musiyano pachena pamwe boka kudzorwa; mwero kuonekwa abnormity idzva rakanga kuvatumwa mwero rokutendeutsa wokuyera, iyo kuburikidza mutongo wakanga hachibatsiri mishonga.
Achifananidza mapoka maviri, 55 nyaya dzakanga efficacious uye 8 nyaya dzaiva inefficacious muna YZXJ boka, efficacy mwero yakanga 87,3%, uye 37 nyaya dzaiva efficacious uye 23 nyaya dzaiva inefficacious muboka kudzorwa, asi efficacy mwero raiva 61.5%; kuenzanisa mbiri groups'efficacy zvazvingava, musiyano waiva pachena, P <0,05.
YZXJ Kamudzira akabatana interventional kurapa, mugarisane 123 zvemapapu bundu varwere vari Meta uye kunopera maitikiro, mishonga boka racho efficacy zvazvingava kwaikosha kudzora boka, P <0,05. The kutongwa yakaratidza kuti Yangzheng Xiaoji Kamudzira aiva mashandiro zvichivhiringidza kenza, uye synergistic chiito pamwe kupindira mishonga; kunaka muupenyu YZXJ boka rakanga mukuru kudzora boka, uye kukunakira yakanga vasingasviki pane boka kuzvidzora. The kutongwa yakaratidza kuti YZXJ Kamudzira aigona kuderedza divi-zvinokonzerwa uye kuwedzera kutapata kuti mishonga pamwe.
Kuvandudza Tumourous Zviratidzo Wedzerai Quality upenyu
Kuvandudza Tumourous Zviratidzo Wedzerai Quality upenyu Achienzanisa mapoka maviri 'efficacy pamusoro zviratidzo, achishandisa chinzvimbo-Muchidimbu bvunzo, Z = -4,060, P <0,001, musiyano waiva Statistical kukosha; YZXJ boka rakanga mukuru kudzora boka.
Zviratidzo zvinosanganisira abdominal kuzara uye distention, kudya spiritlessness uye simba, soreness uye simba rechiuno mabvi, tsvuku weti uye unzenza zvituru, nefivhiri uye kurwadziwa; vose pamusoro zviratidzo achapiwa graded ne pfungwa. Rurimi muviri, rurimi jasi uye kupomba vanobatanidzwa mune chiratidzo zvinodiwa uyewo.
Kuenzanisa mapoka maviri 'Zviratidzo vasati uye pashure kurapwa, vashandi Mann-Whitney bvunzo, P> 0,05, mapoka maviri aiva akafanana; achienzanisa D-kukosha mapoka maviri, pamusoro zviratidzo 'P <0,05, musiyano waiva Statistical kukosha; YZXJ boka rakanga mukuru kudzora boka iri kuvandudza pamusoro apa zvekuchipatara zviratidzo.
Yangzheng Xiaoji Kamudzira chaizvo marwadzo uye Wedzera Strength Zvokunyama
Yangzheng Xiaoji Kamudzira chaizvo Chekubatsira Alimentary Canal Zvakaitwa nokuda Kurapwa Drugs
Simbisa Immune Rinoshanda tunodzivisa Tumourous Growth
Patient Mr. Yu, munhurume, makore 62 okuberekwa
Aug 15 vakasuwa 2005, nezviratidzo akadai chikosoro kumusoro phlegm uye ropa, nokumanikidza chipfuva emaciation, kuburikidza CT bvunzo ine A pamwero rechitatu muchipatara giredhi akaonekwa zviratidzo sezvo kenza zvakanaka-yemapapu (pathologic chirwere aiva adenocarcinoma). Sezvo kurudyi pleural effusion, oparesheni haana kuwanikwa, uye ukama vakaudzwa kupona yaizova chete kwemwedzi yakawanda. Pasina chemo uye redhiyo dzokurapwa zvinodhaka, vachitora Yangzheng Xiaoji Kamudzira, 4 capsules muzana nguva, 3 nguva pazuva, Nov 14 vakasuwa 2005 (84-mazuva 'kurapwa), havi uye uremu kwakawedzera uye nesimba mumuviri akanatsiridzwa; CT apiwa bvunzo: bundu shrunk kusvika pamwero uye kodzero pleural effusion aingofunga zvachose.
Sep 15 vakasuwa 2006 (13-mwedzi 'kurapwa), murwere kudya, uremu uye simba chaizvo zvakawedzera, uye zvishomanana basa rakanga kuwanika. Apr 15 vakasuwa 2007, havi zvakajairika, uremu awana uye ezuva akapora kuti wokuyera; CT apiwa bvunzo: hapana musiyano pachena.
Yangzheng Xiaoji Kamudzira
【Chokutenderwa No.】 License weHurumende Drug Administration Z20040095
【Main Ingredients】 Radix Astragali, Fructus Ligustri Lucidi, Radix Ginseng, ngano chakuvhe, Rhizoma Curcuma Phaeocaulis, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Kuchidzira-chakabikwa), Herba Hedyotidis Diffusae nezvimwewo
【Zvinoratidza】 dzekugonesa kutapata uye zvichivhiringidza bundu
【Clinical Applications】 Vachitora pamberi kushanda kunogona kuwedzera wokurarama kushanda. Paitwe kupora, kuderera metastasis uye kudzivirira kubva kuitazve avhiyiwa Zvokuvandudza efficacy kuti radiotherapy uye mishonga, kuderera mishonga chipimo chemushonga, uye kuderedza divi-kushanda. Vandudza Nzara uye kunaka kwoupenyu uye uremu kune palliative kurapa.
【Administration & chipimo chemushonga】 Tora zvokuvataurira nomuromo, 4 capsules neimwe nguva uye ka3 pazuva
【Specification】 0.39 g / Kamudzira
【Package】 Aluminum-epurasitiki pasuru 36 capsules / bhokisi, mabhokisi 400 / atorwa